Serge Aurier oo ugu danbayn helay dal ku galka England kuna soo jeeda Horyaalka Premier League? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Serge Aurier oo ugu danbayn helay dal ku galka England kuna soo jeeda Horyaalka Premier League?
(31-8-2017) Cayaaryaahnka garabka danbe ee daafaca uga cayaara naadiga dalka France ee Paris Saint-Germain Serge Aurier ayaa lacadeeyey in uu ugu danbayn helay dal ku galka dalka England isla Markaana uu imaan doono Horyaalka Premier League Saacadaha soo socda.
Serge Aurier oo ay doonayeen kooxo badan oo yurub ah lasheegayaa in uu heshiis kagaaray Naadiga Tottenham oo PSG kaga iibsatay aduun lacageed gaaraya £23m isaga oo dhawaan ka soo dagi doona Garoonka diyaaeadaha London halkaa oo uu Tijaabo Caafimaad kumari doono.
Xiddigaan ayaa Tottenham u saxiixi doona heshiis shan sano ah Waxaana uu buuxin doonaa booskii uu baneeyey Kyle Walker oo u dhaqaaqay Manchester City oo lacag aad u fara badan ku qaadatay.
Safaarada Ingiriiska ee magaalada Paris ayaa xaqiijisey in Cayaaryahanka Serge Aurier uu fasax u yahay in uu aado dalka England oo horay looga mamnuucay kadib markii farhiisa laga helay in uu yahay danbiile aan ka bixi karayn dalka France taas oo laga tiray markii danbe.